Kedu ihe eji eme mmiri ozuzo uhie? | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe omuma banyere ihu igwe nke taa bu, ihe n’enweghi obi ojoo, bu otu n’ime ihe ndi ozo n’ile ndi mmadu anya n’uwa nile. Ma ọ bụ, You nwere ike were ya na ị na-agagharị n’obodo gị, na mberede mmiri ozuzo malitere ịse ... acha ọbara ọbara?
A hụla mmiri ozuzo na-acha uhie uhie n'ọtụtụ ihe nkiri akụkọ sayensị, na ọbụna na-ekwu na mgbe ọ mere na ọ bụ n'ihi na Apọkalips na-abịa ma ọ bụ na ọ bụ ọbara nke Chineke. Ma, Gịnị ka ọ bụ n'ezie?
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị ịtụnanya nke na-eme obere oge, na India a na-eji ha eme ihe (dịka mmadụ nwere ike isi jiri ihe a mee ihe) na, kemgbe 1896, mmiri ozuzo uhie na-eju ha anya. Na mpaghara Kerala na 2001 na mgbakwunye na ike ịhụ oke mmiri ozuzo na-adịghị ahụkebe, ha nwekwara ike ịnụ ụtọ ihe nkiri ahụ lee odo, oji na ndu ojo si n’eluigwe daa.
Otú ọ dị, ọ bụ ruo mgbe mmiri ozuzo na-acha ọbara ọbara nke dara na 2006 ka a malitere ịmụ ihe a, nke, site n'ịhụ ntakịrị mmiri ozuzo a site na microscope, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike ịhụ mkpụrụ ndụ ... nke nwere ike ịbịa site n'otu ebe na Eluigwe na Ala . N'ezie, a nụrụ asịrị na ha nwere ike ịbụ mkpụrụ ndụ nke ụwa. Ihe gọọmentị India gọnahụrụ kemgbe ekele maka ọmụmụ ndị ọzọ metụtara mmiri ozuzo nke agba ndị ọzọ, ha nwere ike ịmata na n'ọnọdụ ndị ahụ ọ bụ algae spores chụsasịrị site na ikuku. Mana… Nke a nwere ike ịbụ nkọwa nke mere na mgbe ụfọdụ mmiri ozuzo na-acha uhie uhie?
Na 2010, ndị nchọpụta ghọtara nke ahụ mkpụrụ ndụ ndị sitere na mmiri ozuzo uhie ha hụrụ n'okpuru microscope enweghị akara DNA ọ bụla, mana ha gosipụtara njirimara extremophilic, ya bu, ha nwere ike ibi n’ime oke onodu ojoo. Ọbụna enwere ike igwu ha na okpomọkụ nke ogo 121.
Apụghị ikweta eziokwu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Gịnị bụ mmiri ozuzo uhie?